Natron: codsi ka kooban halabuur dijitaal ah oo la mid ah Saameynta Kadib | Laga soo bilaabo Linux
Natron waa software bilaash ah oo furan oo noo ogolaanaya halabuurka dhijitaalka ah, barnaamijkani waa saamayn ku yeeshay softwares ka kooban digital kala duwan sida SoftEddie, Avid Media Illusion, Apple Shake, Blackmagic Fusion, Autodesk Flame, iyo Nuke, oo ay ka soo saarto istcimaalaheeda isticmaalaha iyo fikradaheeda badan.
Natron waxay taageertaa plugins ku socda OpenFX 1.4 API. Inta badan ganacsiga iyo ilaha furan OpenFX-ka waa la taageeraa.
1 Ku saabsan Natron
2 Sidee loo rakibaa Natron Linux?
Ku saabsan Natron
Barnaamijka waxaa soo saaray Blackmagic Fusion si ay u ahaato mid bilaash ah, la qaadi karo, iskutallaab, oo waxaad siisaa qalab adag oo hufan oo loogu talagalay muusikada si loo gaaro natiijooyin tayo sare leh iyo heerar deg deg ah.
Natron wuxuu leeyahay istcimaalo adeegsade caan ah, fudud oo loo maro loona habeeyo, waxaana ku jira taageerada muuqaalka shaashad badan iyo Retina bandhigay on MacOSX.
Barnaamijku waa khafiif (marka loo eego barnaamijyada kale ee qaybtaan ka tirsan), si aad u isticmaashidna waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysato PC leh processor ugu yaraan 2.3 GHz ah ama ka sarreeya, oo leh ugu yaraan 3 GB oo RAM ah iyo kaar garaaf ah oo la jaan qaadi kara OpenGL 2.0 iyo OpenGL 1.5 oo leh xoogaa kordhin.
Inbadan oo idinka mid ah waad ogaan doontaa in midkoodna alaabada Adobe aysan diyaar u aheyn barnaamijyada Linux, sidaa darteed Natron waa bedel aad ufiican oo loogu talagalay Ka dib Dhibaatooyinka kadib oo mudan in la isku dayo oo la isku dayo.
Natron Waxay leedahay astaamaha soo socda, kuwaas oo aan ka muujin karno:
Interface interface dareen leh : Natron ujeedkeedu maaha inuu jebiyo caadooyinka adoo siinaya baraha isticmaalaha ee dareenka iyo garashada leh. Iskuxirka isticmaalaha garaafka waxaa loo qeybin karaa tiro shaashad ah. Waxay taageertaa bandhigyada 'Retina bandhigay' ee MacOSX.
Multitask : Natron wuxuu bixin karaa sawiro kala duwan isla waqtigaas isla markaana ka faa'iideysan karaa 100% awoodda xisaabinta ee processor-kaaga.
Matalaada shabakada: Natron waxaa loo adeegsan karaa aalad xariiq amar ah waxaana lagu dhex dari karaa maareeyaha wax soosaara ee bixiya sida Afanasy.
Natron sameeye- Qalab xariiq amar ah oo lagu adeegsado qoraallada Python iyo faylasha mashruuca. Nooca xariiqda taliska waxaa laga fulin karaa ssh kombiyuutarka aan la soo bandhigi karin.
Daawade dhaqameed oo is-dhexgal ah - Jaangoyn / dhejis sax ah oo sax ah xitaa cabirka muuqaalka oo aad u ballaaran (waxaa lagu tijaabiyay 27k x 30k images).
Dib-u-soo-celinta waqtiga dhabta ah : Natron waxay bixisaa dib-u-soo-celin dhab ah oo ay ugu mahadceliso tikniyoolajiyadeeda RAM / disk. Marka qaab la bixiyo, isla markiiba waa la soo saari karaa ka dib, xitaa cabbirka sawirrada waaweyn.
Tafatirka mooshinka : Natron wuxuu bixiyaa hab fudud oo hufan oo wax looga qabto keyframes leh tifaftire qalooca oo sax ah oo macquul ah. Waxaad ku dejin kartaa muujinta gooladaha animation-ka si aad ugu abuurto dhaqdhaqaaq fudud oo la aamini karo walxaha.
Natron sidoo kale waxay kudareysaa warqad macluumaad oo si buuxda ujirta oo si dhaqso ah u tafatirto clips-ka iyo keyframes-ka waqtiga banaan.
Qulqulka shaqooyinka badan: Natron wuxuu badbaadiyaa waqtiga isagoo ku ilaalinaya dhammaan aragtiyada isku xigxiga. Waad ka go'i kartaa aragtida wakhti kasta oo aad la gashid noodhka OneView.
Rotoscopy / Rotopainting- Tafatirka maqaarkaaga oo u noolee si ay ula shaqeeyaan darbooyin adag
Qoraalka Python: Natron waxay sameysay inta badan shaqadeeda iyada oo loo marayo Python API.
Sidee loo rakibaa Natron Linux?
Haddii aad rabto inaad ku rakibto codsigan nidaamkaaga waa inaad tagtaa xiriiriyaha soo socda halka aad kala soo bixi karto arjiga.
Marka laga hadlayo Debian, Ubuntu iyo kuwa ka soo jeeda kuwan waa inaad furtaa terminal oo aad fulisaa amarka soo socda:
Iyo waxaad ku rakibaysaa maamulaha dalabka aad doorbideyso ama amarkan:
sudo dpkg -i Natron*.deb
para kiiska Fedora, CentOS, openSUSE ama qaybinta kasta oo leh taageerada xirmooyinka rpm waa inaad fulisaa amarkan:
para ku rakib furSUSE ama mid ka mid ah noocyadiisa soo-saarka ah, fur terminal oo socod:
sudo zypper install Natron*.rpm
Intaad ku rakibayso Fedora, RedHa, CentOS iyo noocyadooda, isticmaal amarka soo socda:
sudo yum local install Natron*.rpm
sudo dnf install Natron*.rpm
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Natron - Codsi ka-dib-u-eg codsi dijitaal ah
Maqaalka waa mid aad u wanaagsan, laakiin cinwaanka xoogaa iska yeelyeel ah, maadaama Natron uu yahay 10% saameynta ka dib. Tifaftirka fiidiyowga ayaa ah xoogaa daciifnimada Linux-ka. Sida qaabaynta sawirka aan u leenahay krita ama gimp iyo 3D blender, marka laga hadlayo fiidiyoowga muuqaalka iyo halabuurka waxaa jira farqi la buuxinayo.
Ku jawaab Rafa Mar Multimedia
PINN: Beddelka NOOBS ee Raspberry Pi